Ganacsatada Yar Yar Ee Soomaaliyeed OO Lagu Maalgelin Doono $10m – Goobjoog News
Shirkadaha yaryar iyo kuwa dhex-dhexaadka ah (SMEs) ee Soomaaliya ayaa hadda heli doona caasumaada si ay u kobciyaan ganacsigooda iyadoo ay ugu wacan tahay maalgalin cusub oo $ 10 Milyan ah.
Shirkadda Norfund ee Shuraako, barnaamijka One Earth Future iyo machadka maalgelinta ee Daanishka, IFU ayaa Isniintii bilaabay Sanduuqa Waqooyiga Afrika ee fursadaha ah ee lagu taageerayo shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee Soomaaliya.
Sida lagu sheegay bayaanka Isniinta, Norfund, oo ay leedahay dowladda Norway, ayaa noqon doonta bilawga hoggaamiyaha dhaqaalaha ee soo bandhigaya $ 5 milyan oo doollar halka Wasaaradda Arrimaha Dibedda Norway ay $ 3 m ku bixinayso.
Intaa waxaa dheer, IFU iyo Arsenault Family waxay sameeyeen $ 2m kasta. Wada-hawlgalayaasha kale waxaa ka mid ah Hantida Horumarinta (Utviklingsfondet), NGO-yo Norwegian ah oo ka hawlgala Somaaliya iyo shabakad jaaliyadaha Soomaalida ee Waqooyiga Yurub.
“Sanduuqa Nordic Centre Opportunities Fund waxaa la rajeynayaa in uu yeesho saameyn weyn oo horumarineed oo uu abuurayo ganacsatada Soomaalida ah si ay u dhistaan ​​ganacsiyo joogta ah, oo gacan ka geysta dhaqaalahooda, dhaqaalaha dalka iyo saldhigga canshuuraha, iyo bulshadooda dhexdooda tiro badan oo shaqooyin ah” maamulayaasha ayaa waxbartay.
Madaxa Maamulka Sare ee Norfolk Kjell Roland ayaa sheegay in dhaqaaluhu uu noqon doono mid kor u qaadaya ganacsiyada yaryar isla markaana si weyn uga qaybqaata soo kabashada dalka.
“Tani waa maalgashiga muhiimka ah ee Norfund iyo tusaale ahaan sida ay suurtagal u tahay in la sameeyo maalgashiga waaweynka ah ee qaar ka mid ah dawladaha ugu nugul,” ayuu yiri Roland. “Waxaan aaminsanahay in dhaqaaluhu uu saameyn weyn ku yeelan doono horumarka Soomaaliya sidoo kalena wuxuu helayaa wax yar oo wanaagsan.”
Qaabka maalgashiga aasaasiga ah wuxuu noqon doonaa muraabaxa oo qiyaasta dhexdhexaadka ah waxay noqon doontaa $ 250,000.
Wada-hawlgalayaasha kale waxaa ka mid ah Hantida Horumarinta), NGO-yo Norwegian ah oo ka hawlgala Somaaliya iyo shabakad jaaliyadaha Soomaalida ee Waqooyiga Yurub.
Lacagta ayaa loo qaybin doonaa dhammaan gobollada Soomaaliya, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn kalluumeysiga, beeraha, wax soo saarka iftiinka, hudheelada iyo tamarta, ayay sheegtay maalgeliyayaashu.